We.com.mm - အလှအပအတွက် မိန်းကလေးတိုင်းညဘက်မှာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အရာ (၅) မျိုး…။
အလှအပလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ အရာတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး…။ အလှအပနဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာလည်း အမြဲတမ်းလိုလိုတွဲနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။ မနက်ပိုင်းမှာ အပြင်သွားစရာကိစ္စတွေ၊ ကျောင်းတွေရုံးတွေသွားရမှာတွေကြောင့် အလှတွေပြင်ပြီးမှ သွားကြတာကလည်း အကျင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ…။ တစ်နေ့တာလုံးမှာလှလှပပနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီး ညဘက်မှာလုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေကလည်း ရှိပါသေးတယ်…။ အဲဒီအရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့…
၁. မိတ်ကပ်တွေကို ဖျက်ရမယ်…
အခုနောက်ပိုင်းမှာ လူတိုင်းကမိတ်ကပ်လိမ်းလာကြပါတယ်…။ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးသွားလို့ ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာလေးသစ်လိုက်ရုံနဲ့ မိတ်ကပ်တွေက ကုန်စင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး…။ မိတ်ကပ်တွေကိုကုန်စင်အောင် မဖျက်ဘူးဆိုရင်တော့ မျက်နှာမှာကျန်နေခဲ့တဲ့မိက်ကပ် အကြွင်းကျန်တွေက မျက်နှာပေါ်မှာဘက်တီးရီးယားတွေအဖြစ် ဖြစ်သွားပြီး ဝက်ခြံတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီး မျက်နှာအသားအရေကိုလည်း ပျက်ဆီးစေပါတယ်…။ မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ မျက်နှာအသားအရေလေးချောမွေ့ပြီး အရွယ်တင်နုပျိုနေတာကိုပဲ လိုချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် အပြစ်အနာဆာမရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့မိတ်ကပ်တွေကို အကုန်ပြောင်စင်အောင်ဖျက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လှပတဲ့အသားအရေမျိုးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…
ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်တွေမှာ မျက်နှာကမိတ်ကပ်တွေကိုလည်း ကုန်စင်အောင်ဖျက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ တိုနာလိမ်းပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်…။ တိုနာက မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေပြားတွေကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အသားအရေကိုကြည်လင်ချောမွေ့စေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကိုလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်…။
၃. Hand Cream လေးလည်းလိမ်းပေးပါ…
Hand Cream လိမ်းတာကလည်း ညဘက်မှာမဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ အလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်…။ ညဘက်အိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း လက်ချောင်းလေးတွေက အစိုဓာတ်ပြည့်ဝနေမှ အသားအရေကနုပျိုပြီး လှပနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ လက်ချောင်းလေးတွေက တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့နူးညံ့နေမှလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာပေါ့…။ ဒါကြောင့် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန်တွေမှာ လက်ကိုရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးပြီး Hand Cream တစ်ခုခုကို ဂရုတစိုက်နဲ့လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်…။
၄. သွားတိုက်ပေးရမယ်ဆိုတာတော့ သိကြတယ်ဟုတ်…
ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်မှာ သွားတိုက်ဖို့ဆိုတာက ငယ်ငယ်ထဲကပြုလုပ်လာကြတဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲနော်…။ ညစာစားပြီးတာနဲ့ သွားတိုက်ပေးတာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သွားပိုးစားတာတွေကိုလည်း လျော့နည်းစေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးတွေကိုလည်း ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်…။ အလှအပထဲမှာ သွားအလှကလည်းပါဝင်နေတာဆိုတော့ မဖြစ်မနေဂရုစိုက်သင့်တယ်နော်…။
၅. Eye Cream လိမ်းပေးဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့…
အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ မျက်လုံးအောက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာပြီး အသက်ကြီးလာလို့အသားအရေပျက်စီးလာတာကို ဖော်ပြနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ညဘက်အိပ်ရာဝင်ခါနီးအချိန် မိတ်ကပ်တွေလည်းကုန်စင်အောင်ဖျက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Eye Cream လေးကို ပုံမှန်လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်နော်…။ Eye Cream လိမ်းပေးခြင်းက မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ အရေပြားတွေကို အစိုဓာတ်တွေပေးနိုင်ပြီး ကျန်းမာစေတာကြောင့် အရေးအကြောင်းဖြစ်တာတွေကိုလည်း လျော့နည်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ဆောင်းတွင်းမှာတောင်အသားအရေကို ကြည်လင်ပြီးလှပနေစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းကောင်း…။
ဆားဝက်ခြံနဲ့ဝက်ခြံတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ ကြက်ဥ face mask
ဒေါ်လာ ၂၀ အောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမိုက်စား Eyeshadow Palettes (၇) မျိုး